Indranteny Yorùbá: Ny fomba fivoaran’ny fiteny · Global Voices teny Malagasy
Miteny hoe àkàrà ianao sa mofo tsaramaso?
Voadika ny 27 Janoary 2020 5:06 GMT
Vakio amin'ny teny Português, Ελληνικά, Italiano, русский, українська, Español, Yorùbá, 日本語, नेपाली, English
Efa anjato taonany marono mifandray ny fiteny. Eritrereto anie ny voambolana “restaurant,” nindramina avy amin'ny fiteny frantsay ho amin'ny fiteny anglisy. Ankehitriny, ity indranteny — voambolana noraisina avy amin'ny fiteny iray mankany amin'ny fiteny iray hafa tsy nasiana fandikanteny — ity mivezivezy amin'ny teny anglisy tahaka ny hoe tsy nindramina.
Vao haingana izao no nampiana tamin'ny Rakibolana anglisy Oxford ny voambolana anglisy nizeriana maro hafa.